स्वर्गमा बन्ने गर्छ यी ४ नाम वाला जोडीहरु ! हेर्नुहोस् कुनकुन अक्षरबाट नाम शुरु हुने जोडीहरुक « Online Tv Nepal
स्वर्गमा बन्ने गर्छ यी ४ नाम वाला जोडीहरु ! हेर्नुहोस् कुनकुन अक्षरबाट नाम शुरु हुने जोडीहरुक
Published :2June, 2018 11:09 pm
भनिन्छ जोडी स्वर्गमै बन्ने गर्छ। प्रेम जोडी सबैको प्रेम सफल हुन्छ भन्ने पनि हुदैन भने विवाह पछि पनि जोडीको सम्बन्ध टुटेको समाजमा सुन्न र देख्न पाइने गरिन्छ। भगवान्ले बनाएको जोडी सात जन्म सम्म पनि संगै रहने कुरा हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरुमा बताइने गरिन्छ। आज हामी तपाईलाई कुन-कुन अक्षरबाट नाम शुरु भएका जोडीको प्रेम सफल हुने गर्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने छौं।
भन्ने गरिन्छ कि ए र एसबाट नाम शुरु हुने जोडीहरुमा राम्ररी समझदारी हुने गर्छ। यस जोडी हरेक शुख-दुखमा समेत संगै रहने गर्छन्। यस जोडी बिच यति गहिरो प्रेम रहन जाने गर्छ कि सानो-सानो कुरामा कहिले पनि झैँ-झगडा नगर्ने गर्छन्। प्राय जसो यस जोडीहरु एक अर्काको भवनको कदर गर्ने हुँदा सम्बन्ध बलियो रहने गर्छ।
एक अर्का प्रति अत्याधिक विश्वाश राख्ने यी दुई अक्षरबाट शुरु हुने नामका जोडीहरु प्राय प्रेम जीवन सही वैवाहरिक जीवनमा सफल रहने गर्छन्। पुरै ईमानदारीका साथ हरेक पाइलामा एक-अर्कालाई साथ दिने यस जोडीको बिचमा समझदारी चिती हुने गर्छ। साथै एक-अर्काको समस्या समे बुझ्ने क्षमता भएका कारण प्राय सम्बन्ध बलियो रहने गर्छ।
आफ्नो प्रेमीलाई जहिले पनि खुशी राख्नु पर्छ भनि सोच्ने यस जोडीहरुको बिचमा खासै तनावको नआउने हुन्छ,जसका कारण सम्बन्ध सधै बलियो समेत रहने गर्छ। एक अर्का परे ईर्ष्याको भाव नहुँदा समेत यस जोडीको प्रेम सम्बन्ध प्राय नटुट्ने गर्छ। जीवनको कुनै पनि पलमा एक अर्का प्रति विमुख नहुने हुँदा यस जोडीको प्रेम साथै वैवाहरिक सम्बन्ध सफल हुने गर्छ।
एक-अर्का प्रति अत्याधिक वफादार हुने यस जोडीलाई प्रेम साथै वैवाहरिक जीवनमा प्राय जस्तो सफलता मिल्ने हुन्छ। एक-अर्का प्रति खासै विरोध को भावना नरहने हुँदा यस जोडी सम्बन्धलाई लिएर खासै तनावमा नहुने गर्छन्। साथै सच्चा साथै चोखो मनले प्रेम गर्ने गर्छन्। दुखको पलमा पनि एक अर्काको साथ नछोड्ने हुँदा यस प्रकारका जोडीको प्रेमलाई स्वर्गमा बनिएको मान्ने गरिन्छ।